အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ကွဲပြားစွာ သက်ရောက်တဲ့ ရောဂါ (၈)ခု - Lifestyle Myanmar
Home Health & Beauty အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ကွဲပြားစွာ သက်ရောက်တဲ့ ရောဂါ (၈)ခု
အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ကွဲပြားစွာ သက်ရောက်တဲ့ ရောဂါ (၈)ခု
Naung Naung Lwin
အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ တူညီတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေနှင့် ရောဂါတူရှိနိုင်ပေမယ့် ဒီရောဂါအချို့ကတော့ ကွဲပြားခြားနားစွာ သက်ရောက်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ပိုမိုခံစားရနိုင်ပြီး တချို့ရောဂါတွေက အမျိုးသားတွေအား ပိုမိုဆိုးရွားစွာ သက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေထက် အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှု ပိုများနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေဟာ တူညီသောပုံစံဖြင့် ဆံပင်ကျွတ်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ headline က နဖူးကနေ တဖြည်းဖြည်း နောက်ဆုတ်သွားပြီး ထိပ်ပြောင်လာပါတယ်။ အမျိုးသားတွေရဲ့ testosterone ဟော်မုန်းက သူတို့ရဲ့ဆံပင်အပေါ် ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှု ရှိတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ Testosterone ဟာ ဆံပင်ကို တိုပြီးပါးလွှာစေတဲ့ ဟော်မုန်းတစ်ခုဖြစ်သော dihydrotestosterone အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေရဲ့ ဆံပင်ကျွတ်မှုဟာ အသက် ၂၀ကျော်မှ စတင်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဆံပင်ကျွတ်တာက မျိုးရိုးဗီဇ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများနှင့်အတူ ပိုကျွတ်နိုင်ပေမယ့် အမျိုးသမီးအများစုက အသက် ၅၀ (သို့) ၆၀လောက်မှ သတိထားမိကြပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေဟာ ရာသီလာစဉ်အတွင်းနှင့် သွေးဆုံးချိန်တွေမှာ သူတို့ရဲ့ဟော်မုန်းပမာဏတွေ အလျဉ်ပြတ်သွားတာကြောင့် ဝက်ခြံပိုမိုခံစားရပါတယ်။ လိင်နှစ်မျိုးစလုံးက ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကနေ လူကြီးဘဝအထိ ဝက်ခြံပေါက်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အမျိုးသားတွေမှာ များသောအားဖြင့် sebum ပိုထုတ်တာကြောင့် ဝက်ခြံထွက်တာ ပိုကြာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Multiple Sclerosis ရောဂါ
Multiple Sclerosis (အာရုံကြောစနစ် ချို့ယွင်းမှုကြောင့် မသန်မစွမ်းဖြစ်စေတဲ့ ) ရောဂါဖြစ်မှုဟာ အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေမှာ ၂ဆ၊ ၃ဆ ပိုများပါတယ်။ သို့သော် အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေထက် ပိုပြင်းထန်လေ့ရှိပါတယ်။ primary-progressive multiple sclerosis (PPMS) လို့သိကြတဲ့ ၎င်းရဲ့အခြေအနေ တဖြည်းဖြည်း ပိုဆိုးလာတဲ့အဆင့်ဟာ အမျိုးသမီးတွေထက် အမျိုးသားတွေမှာ ပိုဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် အရိုးပွရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၄ဆပိုများပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့အရိုးဟာ ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး ပါးလွှာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ သက်တမ်း ပိုရှည်တာကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီး ၅၅၀၀၀ခန့်ဟာ လေပိုဖြတ်ခြင်း ခံရပါတယ်။ နှစ်စဉ် လေဖြတ်ခြင်းကနေ သေဆုံးမှုဟာ အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုများပါတတယ်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတွေဟာ လေဖြတ်တဲ့ လက္ခဏာချင်း တူညီသော်လည်း အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက်ရှုရခက်ခဲခြင်း၊ စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း၊ လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း နှင့် ကြို့ထိုးခြင်း ကဲ့သို့သော သိသာထင်ရှားတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ပိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။
၆။ Heart attack
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးဟာ သူတို့ရင်ဘက်ပေါ် ဆင်တစ်ကောင်ထိုင်နေသလို ခံစားရတဲ့ ရင်ဘက်ဖိအားကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အမျိုးသမီးတွေဟာ ဒီလိုရင်ဘက်ဖိအားမခံစားရဘဲ Heart attack နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရင်ဘက်အောက်ပိုင်း (သို့) ဝမ်းဗိုက်အပေါ်ပိုင်း နာကျင်တာ၊ အသက်ရှူမဝတာ၊ မူးဝေတာ၊ အားနည်းတာနှင့် အပြင်းအထန် မောပန်းနွမ်းနယ်တာကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
၇။ စိတ်ကျရောဂါနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှု
အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် စိတ်ကျရောဂါနှင့် စိုးရိမ်စိတ်ကို ပိုခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေ မခံစားရတဲ့ အရာတွေဖြစ်သော ဥပမာ- ကျားမအခြေခံတဲ့ ချိုးဖောက်မှုများ၊ လူမှု-စီးပွားရေး အားနည်းချက်များ၊ ဝင်ငွေ မညီမျှမှုနှင့် လူမှုရေးအဆင့်အတန်း ဦးစားပေးမခံရခြင်း စတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေ ဘယ်တော့မှ မကြုံတွေ့ရတဲ့ depression မျိုးလည်း ရှိတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်၊ ကလေးမွေးဖွားချိန်၊ ရာသီစက်ဝန်းနှင့် သွေးဆုံးခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းက ပိုတိုတောင်းပြီး ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ အကွာအဝေးတိုတို သွားရတာကြောင့် အမျိုးသားတွေထက် ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း (UTIs) ပိုဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှ ကြည့်ရင် ရောဂါပိုးကူးစက်မှုက ဘက်တီးရီးယားထက် ဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်တာကြောင့်အမျိုးသားတွေမှာ အခြေအနေ ပိုရှုပ်ထွေးပါတယ်။
Previous articleသင့်ရဲ့ကိုယ်နေဟန်ထားကို တိုးတတ်စေနိုင်တဲ့ တစ်နေ့ ၂မိနစ်လေ့ကျင့်ခန်း
Next articleကလေးတွေမှာ အစာစားချင်စိတ် ပျောက်ဆုံးရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၉)ချက်
သင်လုံးဝလျစ်လျူမရှုသင့်တဲ့ ပရိုတင်းဓာတ် ချို့တဲ့နေတဲ့လက္ခဏာ (၈)ချက်
အပြင်ဘက်မှာ အေးတဲ့အခါ ဘာ့ကြောင့် ပိုပြီးဆီးသွားချင်ကြတာလဲ?
ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေမှာ ဟာသကို ရှာတွေ့နိုင်သူက စိတ်အားကောင်းလွန်းသူတွေပါ
အများနဲ့မတူအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ဇာတ်ကားများ
Dmo aung - April 5, 2020
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်ရင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ သရုပ်ဆောင်တဲ့ ပုံစံဟာ သူတို့သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ ဇာတ်ကောင်ပုံစံနဲ့ လိုက်ဖက်နေရင် ကြည့်ရတဲ့ သူအဖို့ အရမ်းစွဲမက်စရာကောင်းလွန်းလှပါတယ်။ အဲဒီလို ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ ပုံစံနဲ့ လိုက်ဖက်မှုရှိအောင်လည်း သရုပ်ဆောင်တွေဟာ အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်ယူခဲ့ကြရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဘယ်ဇာတ်ကား တွေမှာ ဘယ်သရုပ်ဆောင်က ဇာတ်ကောင်နဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိအောင်ဘယ်လိုတွေကြိုးစားပေးဆပ်ခဲ့တာလည်းဆိုတာကို...
တစ်နှစ်သား ဘေဘီလေးတွေအတွက် အပတ်စဉ် လှုပ်ရှားမှုများ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ဘေးကာလမှာ ဘွဲ့နှင်းအခမ်းအနားအတွက် ထူးခြားတဲ့ အဖြေတစ်ခု တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ဂျပန်တက္ကသိုလ်
ဝူဟန်ကာကွယ်ဖို့ Mask မတပ်ဘူးလို့ အမေရိကန်သမ္မတထရမ့် ပြော
မိဘတွေ မခံမရပ်နိုင်အောင် အဘိုးအဘွားတွေမကြာခဏပြုလုပ်တတ်တဲ့အရာ (၉)ချက်
သင့်ကလေးမှာ Autism(အော်တစ်ဇင်) ရှိနေနိုင်တဲ့ လက္ခဏာများ
နာမည်ကြီး YouTuber ရဲ့ ဗီဒီယိုအတိုင်း ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်ပြုလုပ်ရာမှ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး သေဆုံးခဲ့တဲ့ ကလေးမလေး
Naung Naung Lwin - September 24, 2019
သခင်အတွက် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်က ကျောက်ပုစွန်ထုပ်တွေကို ရေငုပ်ပြီး ဖမ်းယူပေးတတ်တဲ့ ခွေးလိမ္မာလေး
Naung Naung Lwin - September 23, 2019
ခြောက်ထပ်ကနေ ပြုတ်ကျလာတဲ့ ကလေးငယ်ကို လက်မတင်လေး ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ အိမ်နီးချင်းများ
Naung Naung Lwin - August 1, 2019
ကိုယ့္ရဲ႕ ရည္းစားေဟာင္း အေပၚ ေက်းဇူးတင္သင့္တဲ့ အခ်က္အခ်ိဳ႕
Kyaw Htike Aung - October 31, 2018
တကယ္ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္လိုပဲ အခက္အခဲေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနပါေစ အၿမဲရင္ဆိုင္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီးသားပါ။
Kyaw Htike Aung - August 7, 2018
ခလုတ္ထိမွ အမိတ ဆိုသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ျပႆနာေတြ၊ ဒုကၡေတြနဲ႔ ႀကံဳလာတဲ့အခါ
Naung Naung Lwin - July 17, 2018
ငါးမိနစ္တစ္ခါ စိတ္ေျပာင္းတတ္တဲ့ မိန္းကေလးတို႔ရဲ႕ သဘာဝ အပိုင္း(၂)
ငါးမိနစ္တစ္ခါ စိတ္ေျပာင္းတတ္တဲ့ မိန္းကေလးတို႔ရဲ႕ သဘာဝ အပိုင္း(၁)
ေလာကမွာ စိတ္ေကာင္းရွိသူ တပံုႀကီးပါ
ကမ္ဘာကိုဝန်ချတောင်းပန်ဖို့နဲ့ နစ်နာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကို လျော်ကြေးပေးဖို့ တရုတ်ကို ကာဒီနယ် ချားစ်လ်တိုက်တွန်း
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Covid-19 လူနာ အမှတ်၅ သေဆုံးသွားပြီ
အိမ်မှာနေဖို့ ငြင်းဆန်သူတွေကို ထိတ်လန့်စေဖို့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟဲမက် တီထွင်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယရဲသား
ရေငုပ်မျက်နှာဖုံးတွေကို အသက်ကယ်စက်‌‌တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ အီတလီအင်ဂျင်နီယာများ
ကွန်တိန်နာတွေနဲ့ အရေးပေါ်ဆေးရုံ ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ အီတလီ
ဗိုင်းရပ်စ်ကို မွေးမြူပြီး ဇီဝလက်နက်အဖြစ် အ သုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စဲချက်နဲ့ အမေရိကန်က တ ရုတ်ကို တရားစွဲပြီ
တရုတ်မှာ ကြွက်ကတစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ “ဟန်တာ”ဗိုင်းရပ်စ် ထပ်ပျံ့နေပြန်ပြီ
Covid-19 ဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးရအတည်ပြု သတင်းများအချိန်နှင့် တပြေးညီဖော်ပြနိုင်မည့် Viber Community အား စတင်မိတ်ဆက်
Follow us on Instagram @lifestyle.myanmar
ကမ္ဘာဟာ ဘယ်တော့ပေါက်ကွဲ ဖွာလန်ထွက်လာမလဲ ဆိုတာ နားစွင့်နေရတယ်
မြန်မာပြည်အတွက် အရေးကြီး ၁၄ရက်နဲ့ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တတိယလှိုင်းစစ်ဆင်ရေး
အမျိုးသားတွေ ပြိုလဲယိုင်ဆင်းသွားစေမယ့် ကျွမ်းကျင်အဆင့် ပရောပရည်လုပ်နည်း (၄) နည်း
Health & Beauty941
Lifestyle Myanmar was established in 2017 which provides information mainly lifestyle andavariety of topics including features, Health & Beauty, Celebrities, investigative stories, etc. Relating to Myanmar which is balanced, timely, and accurate for Burmese audiences.
© Copyright 2017, Lifestyle Myanmar Digital Media Production in Myanmar.